E nwere ọtụtụ free ụzọ nyefee gị data na ihe ochie Nokia ekwentị na a Nokia Windows ekwentị. Ọtụtụ n'ime ndị a ụzọ nwere ọtụtụ nzọụkwụ na ndị mere unreliable. Ka na-anya na abụọ n'ime ụzọ ndị a nakwa ka ha na uru na ọghọm. Ọ bụ olileanya anyị na ị ga-enwe ike ịchọta ụzọ na kasị mma suut gị mkpa.
1. Iji a PC ahịa ka ịgbanwee gị data
2. syncing Data kpọmkwem site One ekwentị ọzọ
3. Nyefee Data si Nokia ka Windows Phone effortlessly
Method Otu: Iji a PC ahịa ka ịgbanwee gị data
Ihe mbụ ị na chọrọ ime na-na-elu-akaụntụ Microsoft gị. Ị nwere ike ikwu nke a nzọụkwụ bụrụ na i nwere akaụntụ Microsoft. Na i nwere a Microsoft akaụntụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye Xbox onye ọrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị a Hotmail akaụntụ.
Anya isi na i guzobere akaụntụ Microsoft gị. Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata Nokia Suite ma ọ bụrụ na ị dịghị ama nwere ya. Melite Nokia Suite na ẹkedori ya. Ozugbo i na Nokia ụlọ ọma melite, na-eso ndị na-esonụ bulite gị ọdịnaya ka SkyDrive.
• Pịa na ngwaọrụ wee bulite ka SkyDrive
• Next, pịa Malite
• Na nke pụrụ ịkpata window, ịhọrọ data na-ịchọrọ ị mekọrịta ka ígwé ojii. Ọ dị mkpa ka banyere na photos naanị ike synced ma ọ bụrụ na ha na-jpg, PNG ma ọ bụ gif formats.
• Nokia Suite ga-ahụ na-arịọ maka ikike iji nweta gị SkyDrive akaụntụ. Nke a bụ ebe ị ga-mkpa akaụntụ Microsoft gị.
• Pịa na Ee ozugbo ị ite n'ime akaụntụ Microsoft gị.
• Gị Data ugbu a echekwara na gị SkyDrive akaụntụ. Kọntaktị gị ga-azọpụta ndị SkyDrive Akwụkwọ ndekọ aha ọtụtụ na foto gị ga-azọpụta na-album.
Iji mezue usoro abanye n'ime gị akaụntụ Microsoft na-eji gị Windows Phone. Ị data ga-ahụ na-akpaghị aka na-amalite syncing site SkyDrive unu ga-Switched data gị Nokia ekwentị gị Windows ekwentị.
The Uru nke usoro a
• Ọ bụ dịtụ mfe ime
• Ndi weghara oge dị ukwuu
• Ozugbo ị zuru ezu Nzọụkwụ otu, nzọụkwụ abụọ mara mma nke ukwuu completes onwe ya
The cons nke usoro a
• E nwere nnọọ ọtụtụ ihe iji na-eso
• Ọ na-adịghị mfe icheta niile nzọụkwụ na ihe omume ị na-agbalị ime nke a na-enweghị ndị nduzi
Usoro abụọ: syncing Data kpọmkwem site One ekwentị ọzọ
Usoro a ga kpamkpam ịdabere na ngwa gị Nokia Lumia ekwentị. Ọ dị mkpa iburu n'obi Otú ọ dị, na usoro a ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee gị kalenda nke foto gị. Ọ na-arụ ọrụ kasị mma maka kọntaktị na ozi.
Ka malitere mkpa ka ị mbụ niile ibudata "Nyefee m Data" App si Nokia ụlọ ahịa. Ọ bụ a free ngwa otú e nwere ọ na-eri aka. Iji budata App otú eso ndị a dị mfe nzọụkwụ;
• Pịa na ụlọ ahịa na akara ngosi na gị Nokia Lumia ekwentị na inweta ohere ka ngwa ọdịnala n'ọma ahịa
• Ozugbo ị bụ na Nokia ụlọ ahịa, pịa "ngwa site Nokia" iji bugote niile ngwa i nwere ike ịhụ na Nokia ụlọ ahịa.
• Pịgharịa ala iji chọta akpan akpan ngwa. Ọ bụ "nyefee m Data ngwa."
• Ozugbo i emi odude ya, Enweta na ọ na ibudata ya n'ime ekwentị gị
• mgbe ahụ enweta na Lumia Home button
• Swipe-ekpe ebe niile gị ngwa ọdịnala na-emi odude na-ahụ "Nyefee m data" ngwa na ị dị nnọọ ebudatara.
• Ozugbo ị na-ahụ ya, enweta na ya ẹkedori ngwa.
• The nzọụkwụ ọzọ bụ nwee Bluetooth na ma igwe na hụ na ha nwere ike n'eziokwu ahụ onye ọ bụla ọzọ
• Pịa na Gaa n'ihu Tab gị "Nyefee m Data" ngwa. The ngwa ga-arịọ gị ka gbanye gị Bluetooth incase ọ bụghị on.
• Ozugbo Bluetooth e agbanwuru ha, na gị Lumia ekwentị ga-ịchọ ọzọ na ekwentị na-arịọ gị ga-ejikọ ha. Soro ntuziaka Lumia ga-enye gị ime ka pairing ọma.
• Iji malite nyefe, Enweta na ndị ọzọ na ekwentị gị nwere ike ugbu a ịkpali kọntaktị gị na ozi ederede.
• Dabere na size nke data, nyefe ga-aka ọtụtụ minit. Ọ dị mkpa na ị na-ma igwe nso ọnụ n'oge transfer usoro.
Ekele, i Switched data gị Nokia ekwentị gị Windows ekwentị.
• Ị na-adịghị mkpa ọ bụla download software na kọmputa gị ma ọ bụ ọbụna jikọọ ọ bụla nke na ekwentị mkpanaaka gị na kọmputa
• Ọ bụ mma mfe iso n'agbanyeghị eziokwu na e nwere ọtụtụ nzọụkwụ.
• The ngwa gị mkpa bụ kpam kpam free na nnọọ mfe inweta.
• E nwere nnọọ ọtụtụ nzọụkwụ na ọ dị nnọọ mfe-efu ebe n'etiti
• The usoro nwekwara kpamkpam na-adabere ná Bluetooth na mgbe ụfọdụ gị ngwaọrụ Bluetooth na otu nke igwe ghara arụ ọrụ ọma
• Na usoro a, ị nwere ike adịghị nyefee foto gị ma ọ bụ kalenda-ejere ya na-abaghị uru gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee gị ndenye kalịnda ma ọ bụ foto.
Abụọ ndị a ụzọ pụrụ ma-bara uru ka onye ọrụ n'agbanyeghị na ha abụọ pụrụ nwere onwe ha adịghị emezi emezi. Usoro otu yiri nnọọ mma maka ụdị nile nke data ọ bụ ezie na complexity nke usoro nwere ike ịbụ a Gbanyụọ ọtụtụ. N'aka nke ọzọ Usoro abụọ arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-achọghị iji gị PC ọ bụ ezie na ị pụrụ n'ezie adịghị nyefee gị ndenye kalịnda ma ọ bụ foto.
Ozi ọma ahụ bụ i nwere ike Mgbanwerịta abụọ ndị a ụzọ ona gị ugbu a mkpa. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee foto na music, ị pụrụ iji na SkyDrive nhọrọ na Anglịkan ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee ozi. Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ ọ dị mkpa ka ị na-eso nzọụkwụ o nke ikpeazụ izere nkụda mmụọ nke a na-emezughị nyefe.
Method atọ: Nyefee Data si Nokia ka Windows Phone effortlessly
Usoro a ga na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na isi iyi Nokia ekwentị-arụ ọrụ na windows usoro. Mobiletrans nwere ike ugbu a nyefee videos, music na foto n'etiti abụọ Windows igwe. Rịba ama na-ebufe kọntaktị ga-achọ Mobiletrans iji weghachi ha si OneDrive ka lekwasịrị windows ekwentị. Ndị na-esonụ site nzọụkwụ nduzi ga-enyere ke ọbọ a ozi.
Nzọụkwụ 1: Download na-emeghe Wondershare Mobiletrans na kọmputa gị. Pịa "na ekwentị ekwentị Nyefee" na isi interface.
Nzọụkwụ 2: Gbaa mbọ hụ na ngwaọrụ abụọ jikọọ kọmputa gị site na iji eriri cables. Ọ bụrụ na isi iyi na ebe igwe na-adịghị n'ụzọ ziri ezi enịm, pịa "tụgharịa" ka ịgbanwee ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Nzọụkwụ 3: Iji họrọ chọrọ faịlụ nyefee, ego n'igbe faịlụ na ụdị na-họrọ faịlụ maka nyefe. I nwekwara ike ikpochapụ data na ebe ekwentị site ịlele ahụ "doro anya data tupu oyiri" igbe tupu ebufe. Ọ bụrụ na-ebufe kọntaktị a chọrọ, Mobiletrans ga weghachi kọntaktị site na OneDrive ka chọrọ ekwentị.
Nzọụkwụ 4: N'ikpeazụ, na-amalite na-ebufe site na ịpị "Malite Copy" mgbe nke igwe anọ n'ọnụ site ná mmalite ruo ọgwụgwụ nke usoro.
Mụta ihe banyere Windows 10 si 5 trailers
> Resource> Windows> Free Ụzọ ka ịgbanwee Data si Nokia ka Windows Phone